MOTIVATION (စိတ်တွန်းအားပေးခြင်း) Human have remarkable ability, but will different between upon your "Must" and "Want". (လူတွေမှာ မှတ်ကျောက်တင်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်တွေရှိပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ သင့်ရဲ့ "ဖြစ်ရမယ်" နဲ့ "လိုချင်တယ်" ဆိုတဲ့ ကွဲပြားမှုအပေါ်မှာတော့ မူတည်လိမ့်မယ်)
COMMUNICATION (ပြောဆိုဆက်သွယ်မှု) Effectiveness will 20% what you "Know" and 80% how you "Fell" about what you know. (သင်သိသွားတယ်ဆိုတာ ၂၀% ဖြစ်ပြီး၊ သိသွားတဲ့အရာတွေကို ဘယ်လိုခံစားသလဲဆိုတာက ၈၀% အကျိုးသက်ရောက်မှု ဖြစ်လာလိမ့်မယ်)
CONCENTRATION (စူးစိုက်မှုရှိခြင်း) When you go, Ahead. When you sit, Stop. If you mix the two will never . . . ! (သင်ရှေ့ကိုသွားနေတဲ့အခါ ဆက်လျှောက်မှုတွေရှိပါစေ၊ သင်ထိုင်နေတဲ့အခါ ရပ်တန့်မှုတွေဖြစ်နေမယ်၊ နှစ်ခုကိုတော့ သွားမရောမိပါစေနဲ့ ဒါဆိုရင်တော့ ဘယ်တော့မှ . . . )
LEADERSHIP (ခေါင်းဆောင်မှုအရည်အချင်း) Lead the way by personal example, personal power and personal philosophy. (လူတွေနားလည်နိုင်တဲ့ ဥပမာတွေ၊ ပင်ကိုယ်မှာရှိတဲ့ အာဏာတွေ၊ လူတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေနဲ့အတူ သွားမည့်လမ်းတွေကို ဦးဆောင်စေပါ) IDEA (အတွေးအခေါ်) One of the secrets to Success is ideas mixed with inspiration and innovation.
(အောင်မြင်မှုတစ်ခုရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ဆိုတာ အတွေးအခေါ်ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ချင်စိတ်ပြင်းပြမှုတွေနဲ့ ဆန်းသစ်မှုတွေရောစပ်နေတယ်) (အမေရီကန်မှာ အကျော်ကြားဆုံးသော စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်ပညာရှင် JIM ROHN) ရဲ့ THE TREASURE OF QUOTES စာအုပ်မှ လက်တွေ့မနက်ဖြန်တွေများစွာမှာ အမြဲလိုလိုသုံးနေဖြစ်တဲ့ စာစုတချို့ ကိုရွေးချယ်ပြီး မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
* မြန်မာပြည်မှာမရနိုင်သေးတဲ့ စာအုပ်ကောင်းတွေကို လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ ကိုနေမင်းသူ (iMyanmar.com) ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အစဉ်ဖတ်ရှုလေ့လာနေတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့မိတ်ဆွေများကိုလည်း THANKS FOR YOUR TIME. အပင်တစ်ပင်တည်းစိမ်းလမ်းနေရုံနဲ့ ကမ္ဘာကြီးဟာ မစိမ်းလန်း လာနိုင်သလိုပဲ၊ တယောက်တည်းကသိနေရုံနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဟာ မတိုးတက်လာနိုင်ပါဘူး။ ကျေးဇူးပြုပြီး မိမိသိလာသမျှကို မျှဝေပေါင်းစပ်ပေးမှုနဲ့ တိုးတက်မှုတွေကိုဖန်တီးနိုင်ကြပါစေ။
Sustainable Grow Together!
Zin Phyo Paing (Future Myanmar) Fb.com/zinphyopaing.mm Fb.com/asiamyanmarsme.mm